Salamanga - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Salamanga - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA
« Ataonay ahoana moa no hangina manoloana izao ftiavan –dehibe nasehonao ny Literatiora malagasy izao ? – Mba tsy vitanay kosa !
Sitraka ! telina ! maminay tanteraka izao fanotronana sy fampiantranoanao ny SALAMANGA izao .
Maniry ihany koa izahay raha maniry, ny mba hiarahanao manjohy hatrany ny soratra sy ny kanto malagasy izay asandratry ny Poeta sy ny FARIBOLANA SANDRATRA ho eo ambany masonao mandrakariva.
ny andy & SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA
INDRAIM – BAVA mialohan’ny « SALAMANGA »
Ny iray avy any BERONONO- Anjozorobe, dia RAMBOLAMANANA Fenosoa Jean Chrysostophe na SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA, ary ny iray avy any FIANARANTSOA dia RAZAFINDRANDAMBO Tovonjanahary na ny andy. Samy efa monina eto Antananarivo izy ireo. Izy roalahy ireo no Poeta hanolotra ny sangan’asany ho anareo ao anatin’ ity « SALAMANGA » ity. Mamelà ahy ianareo raha tsy hanazava ity lohateny ity aho aloha, fa antenaiko ho takatrareo tsikelikely ny dikany rehefa mandinika ny tononkalo rehetra ato ianareo. Azo lazaina fa ny lafim –piainana rehetra no kaloin’izy roalahy. Ny voam –bolana sy ny sarin –teny anehoany azy dia samy manana ny azy izy ireo, fa angamba ny gadona mety misy itovizana ihany.
Hianoka ity « SALAMANGA » ity ianareo, ary hiaiky fa tsy ho lany hamamiana velively ny TENY MALAGASY. Tsy ho fitahirizana ny lanja sy ny hasin’ny teny koa ve no tena asan’ny Poezia voalohany ? Mikolokolo an’izany ny talentan’i SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA sy ny andy. Sady ho fifaliantsika sy reharehantsika izany. Fisaorana mitafotafo no atolotra azy ireo, ary indrindra ho anao izay manatevina ny Haisoratra malagasy ihany koa eo am –pandinihana ny tononkalon’izy mirahalahy.
FANOROAM – PEJY
I – SORA – PIAINANA
1-LASITRA ( SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
2-FA FADIRANOVANA (ny andy)
3- ZAZA RATSY TAIZA (SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
4-TAZANO (ny andy)
5-ALEO HIHARIHARY (SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
6-VERO… (ny andy)
8-NY DITRAN’ISE (SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
II – LOKOM – PITIA
9-FI-ANATSA (ny andy)
10-MIVAONA (SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
11-FITIA VEHIVAVY (ny andy)
12- HAFATRA TSOTRA(SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
13-KENDAROROKA (ny andy)
14-FIRIFIRY ? (SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
15-MILOKO TSY FITIA (ny andy)
17-FAHATSIAROVANA (ny andy)
18-RANO TRAMBO(SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
20-NY ZANAK’OLONA(SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
III – TOPIN’ENDRIKA
22-NY ZANAKO(SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
23-ANKAFIZO (ny andy)
24-MARARY VAVONY(SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
25-LAINGA MARINA (ny andy)
27-EKEO (ny andy)
28-LANIN’NY KARY(SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
29-VAVAKA HO AN’NY NATIORA (ny andy)
30SALAMANGA ( ny andy & SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA)
SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA, araka ny fahafantarako azy
Olom –boataiza tamin’ny fiainana Kristianina izy, ary
mpandala ny MAHA – MALAGASY, indrindra fa eo
amin’ny fahendrena sy ny FIHAVANANA ; tena
mahasaro –piaro azy mihoatra noho ny olon –tiany ireo.
Olon’ny fo tokoa izy, sady olon’ny saina rahateo, ary
raha ny sangan’asany no asian- teny sy atao indray
mibango dia teny hafatrafatra sy feno anatranatra
mandrakariva, ka mazàna manaitra ny sain’ny maro, mba hamoha indray ilay fahendrena nananan’ny MALAGASY FAHINY ; raha tsy hilaza afa –tsy sombintsombiny ihany aho, toy ny hoe : « TENY FAHENDRENA », « MANDRIANA », « HAFATRA TSOTRA », « AVY AIZA ? », « …hizaka adidy ianao Sakaiza, fa miandry anao ny Zanak’Olona …», « Ny antony tena nahafaty an’i Neny ?- NY DITRAN’ISE ! », ary famerimberiny matetika aminay sy tsy mba fanadinony raha manotrona fampakaram – bady, ny hafatrafany mafonja hoe : « NY ZANAK’OLONA E ! TANDREMO !!! ».
Tononkalom –pitolomana sy sehatry ny andavan’andro iainana no tena nahafantarako azy, na dia maro amin’ireo tononkalony mamakivaky fitiavana aza no efa saika laniko tsianjery ; ka ahasahiako milaza fa mendri –piderana sy fankasitrahana izany talenta ananany izany. Mailaka ery aho mifanerasera aminy amin’ny mailany : sarondrahona13@caramail.com
Mampahatsiahy ahy ny Olomangan’i Madagasikara iray , sady nanaitra ny saiko ny fitiavan –tanindrazana nasehony, raha vao 23 taona monja izy dia sahy nandray ny adidiny ka nilatsaka hofidiana ho BEN’NY TANANA : taona 2003 tamin’izay !- Adidy mavesatra izany , kanefa tsy nampihen- danja ny hetahetan’ny fampandrosoana ananany akory ny maha –MPANOLOTSAIN’NY TANANA AZY ao amin’ny Kaominina Ambanivohitr’i BERONONO- Fivondronan’Anjozorobe, ankehitriny. Toa tsaroako eto ilay tenim –pahendrena napetraky ny Olo –malaza hoe : « Tsy miamboho adidy aho, mon Général ! ». Toloram –pankasitrahana ireo naha –hazo vanon-ko lakana azy, na ny Rainy Célestin RAMBOLAMANANA, izay BEN’NY TANANA LEFITRA ao BERONONO amin’izao fotoana, na ny Reniny Mariette RAMINOARISOA , izay samy mbola velon’aina avokoa., ka otronin’izy sivy mianadahy naterany.
Farany, Ilay nahary izao rehetra izao anie hitsinjo ny Poeta sy ny asany, ka hitoetra ho Poeta Mpanakanto hatrany izy, hitombo amin’ny fanabeazana, fa tsy ho mpitari –bato vilam –bava.
Anterina ny fisaorana mitafotafo ho an’ilay Nahary , nandrindra sy nandavorary izao fotoana mamy izao.
Mankasitraka anao Mpankafy, Mpijinja sy Mpioty ny vokatray Poeta
Ny Zoky malalan’i Zandry tsy foiny :
ny andy ? Olona mpandala ny maha – malagasy ihany koa izy, ary mpankafy zavakanto : azo ambara fa io no voaloham –pitiavany.
Olom –boataiza tamin’ny fiainana Kristianina ihany koa anefa izy. Tany FIANARANTSOA tany,hono, izy no nisy fanahy nibitsika raha vao 14 taona monja ka nahatonga azy hanoratra sy hilomano tao anatin’ny soratra. R T V N no solon’anarana nentiny tamin’izany, izay fanafohezana ny anarany ihany. Niova ho « ny andy » anefa izy io tato aoriana rehefa nitombo hadiry tao am –pony ny fitiavana sy fitrandrahana ny kanto malagasy.
Tsy ny soratra ihany no iangalian’i ny andy fa sady Mpamoron –kira izy no mpanao hosodoko ihany koa, ka ilay solon’anarana RTVN no nomeny ho an’ny sary. Mety ho hitanareo eny ananonanona eny ny sangan’asany.
Amin’ny maha –Mpanoratra vao erotrerony an’i ny andy dia saika maro taratra ao amin’ny asa sorany ny lokon’ny fitiavana. Izany anefa tsy manakana azy tsy hiangaly endrika hafa , momba ny tontolo iainana, na ny Tanindrazana ohatra, sy ny maro hafa koa. Lambahoany (SALAMANGA) mantsy ny asa sorany, hoy izy, ka sady maro soratra no henika karazan –doko mifangaro, izay mahakasika ny fiarahamonina manontolo.
Eto am –pamaranana no anambarako aminareo fa mbola mpitovo izy, ary sady efa miasa no mbola mianatra ihany koa amin’izao fotoana izao.
Tena farany ! Fiventin’i ny andy ny hoe : « ny andy » na « R.T.V.N », dia ilay solon’anarana voizin’ny penina .
Ilay Akama toa kambana amin’i ny andy
Isika mitovy fa toa tsy sahala :
Niara – nitafa tanaty koràna !
Niara – nitavan riana sysangy !
Nandritra ny fiainana teto an –tanàna.
Raha fihavanana ? – Niara – nandala :
Nivoaka sy niditra teo an –tokonana !!!
Ianao moa voaroaka,
Ny iraisantsika dia zavatra tokana :
Samy kamboty mitrongy vao homana !
Samy manembona tsy afa –mamangy !
Isika dia tena mitovy tanteraka :
Samy tsy misy hatoriana maraina
Fa miarin –tsy fidiny, hamonjy kapoaka ;
Kanefa in –jato sy arivo hambakaina ;
Miaina amin’ny sitrany ahay, toa tsy reraka !
Sedrain’ny fiainana anatin’ny ady…
Ianao miaritra any,
Ny eto zakaiko.
Iray izao ny lasitra anaovana antsika :
Samy madinika mbola mitady,
Manangona vary… mitsimpona laoka !!!
An –dalana isika no sendra nihaona,
Dia nihemotra tany amin’ny taloha foana
‘Zay mba resatsika ;
saika hadino ny mandra –pihaona…
27 Novambra 2003/ t@ 5ora 55mn maraina
II S 38 Anjanahary – ANTANANARIVO
Miondrika mora ny hariva mangitsy
Ny ainy badenin’ny tontolo andro
Misento tsy satry
Ity vatana ngoly sy tena manify
Miafy ny anjara mangidy famango,
Mahantra izy mantsy !
Dia,indrindra ao anaty
Fa aza tsy fidiny ny toerana misy !
Fa aza nahilika ny zo keliny
Ontsa ny fony kamboty fitsiky
fa lasan’ny ngeza ny anjara tanteliny
Onena ny jery
Ongaina irery !
Fa manonja maina ny fiainana an –tany
Manonga taraina ny efa tomany
Mandrotika mora ny ati – fanahiny
Vaka hazavana fa maizina ny andro
Dia ny masoandro ?!
Indray andro any hiposaka ihany
Ho foana taraina ny fahantrany.
Miloko tsy hita isa ;
Sy tsiky very fonoka
Ho eto,… feno sento :
Moroa safononoka !
Fa aina iray manento
Milaza sora – dihin’
Ny zava –misy anaty ;
Ho anao Mpankafy :
Tia ainga malagasy.
Ary hevitra Poeta,
Nofoiny ambony ampanga ?
Ho anao marisarisan’
Izao tontolo izao,
Nakàna anao avy ao
Ny singan –tsalamanga,
Ho any am –paradisa…
Tofoky ny fiainana ?
Hihemotra amin’ny tolona ?
Resin –jangajanga ?!
Maraina, atoandro, hariva :
Aza hadinoina :
Rakofy i SALAMANGA !!!
Diso ihany ianao
Nandroboka ny ankizy
HilÒna anaty harena ;
Natao tsy ho orim –bola,
Navela hiala nenina
Amin’izay rehetra tiany :
Navela ho afa –po .
Kinanjo izao no farany :
Ny harenanao miha –ritra,
Ireo izay tonga taona
Tsy misy fahendrena,
Fa tampony amin’ny ditra !
Vao zaza folo taona
Dia tsisy fanajana
Fa mamotsifotsy olona :
Zatra nihanta loatra
Sy zatra fahafahana ;
Zatra tsy voageja,
Nanjary baranahiny !
Ianao no maty kora,
Fa diso taiza loatra
Sy nihafy tsora –kazo
Ka lasa fotsy rora !
‘zao ny zanakao,
Malaza hatraiza, hatraiza
Fa « ZAZA RATSY TAIZA ! »
08 Jona 2003 /t@ 3ora 07’ hariva – Ambatomainty Antananarivo
Masiaka ianao ry tany,
Masiaka fararano ;
Ny fo manganohano
Mahita ireto ankizy
Tsy manan –tsiny loatra
Misedra an –katerena
Ny sompatrao fiainana
Masiaka, tsy onena…
Dia vatranao tokoa
Ny tsy misento izany an !?
Masiaka ianao ry tany
Misoko ny ririnina
Any an –katoka tsy hita,
Mandona ireo mahantra.
Indrisy… dia nahavita
Nandoko tsy nambinina
Ny ory sy efa vaka
Ho takon –tara –bolana
Ao an-kaizin’ny masoandro
Ny nofinofy maminy
Eny an –tanim – pamoizana
Madilo ! Mangidy loatra izany.
Fa …meteza iray minitra
Hiaina an –tapitrisa
Ny ampitso efa vita
9 Desambra 2002 /t@ 6ora 02mn hariva
VAVAKA HO AN’NY NATIORA
Ry Andriamanitra Fitiavana,
Tsinjovinao ity Nosinay
Aza avelanao ho ngazana
Na ho kila sy ho may
Tahionao ity Firenena
Omeo hery sy finiavana
Hikajy azy tsy ho mena
Henoinao ny feo miantso
Miantsa ho an’ny Tanindrazana
Mamerina ny anara –maintso
Ianao no Ray Tsitoha
Ianao no tsy tambazana
Fa miahy an –tsitrapo
Koa enga anie…
Ireo voaary analin –kisa
Napetrakao hivelona eto
Hiaina an –tany paradisa
Ho lavitry ny sentosento.
13 Aprily 2001
LANIN ’ NY KARY
Maty dia maty !!!
Kanefa ny valin’ireo fitakiana natao hatrizao,
Tsy misy mazava !
Mba hoe nokarohina, izay olon –dratsy
Sy nahavanon –doza ;
Ka inona no eo ?
Araho ny tantara,
Fa nisy ny hoe :
« Fomba fiady nalamina tsara »,
fa tsy hita ny vokany.
Toa ireo « SAMY ISIKA »
Sy « TSINDRANOLAHY »
No indray nasahotany.
Ireo fitondrana nifandimby teto,
Isao hoe : Firy ?
Dia iza no tena nitolona mafy
Sy tena nikiry ?
Tsy mbola hita maso
Izay tena ati –doha
Manahy aho ry zandry,
Ary azoko an –tsary ;
Raha tany aminay izao
No nisy ohatr’izany a !
Dia hoy indray ny sasany :
« Ny akolahy tsy naneno hatrizay
Efa lanin’ny KARY e ! »
11 Febroary 2004/ t@ 11ora 32mn atoandro
tao amin’ny BIRAON’NY KAOMININA
Iza amintsika no tokony hisaina ?
Fa ho avy ny ankizy rahampitso maraina
Hitsara an’izao ;
Haveriko samy ho reny daholo
Ny karazandrazam –pahotana mahafaty
Tsy zakako tao :
« Tsy azo dohirina ianao, tsy terena,
Tsy azo kianina »;
Nefa efa rain’ny fametsifetsena
Tsy laintran’ny mafy !
Aleo hiharihary amin’ny Olon –drehetra
Fa « IANAO TSY MILAMINA E ! »
Tsy manan –tahotra, tsisy hamenarana ;
Hoatran’ny olona tsisy fanahy
Sy tsy mba mitafy.
Izaho tsy te –hihevitra zavatra lalina :
Ianao marary raha very an’arivo,
Fa maka aman’alina ;
Sahy misoloky !
Ny olona handroso na iza, na iza
Dia omenao toky,
Terena hiasa amin’ny ora rehetra…
Hiasa Alahady !
Kanefa in –jato sy arivo hambakaina !
« Halatra anie izany ataonao izany e ! »
Anatra mba tsy misorona ny ahy
Fa isika tsy miady !
Tokony hiova e !
Saino ny zavatra nataonao
Fa ohatry ny vitan’ny maty fanahy !!!
17 Febroary 2004/t@ 6ora 41mn hariva
II O 82 Anjanahary – ANTANANARIVO
Mifofo, nijinja iry fela – maraina
Ny rivo –mahery mpanditsoka lalina
Mandrangotra anaty ilay fo noratraina
Ny sompatra kanto mpanosika hivarina
Nandrotika mora ireo zana –borona
Ny onjan –tadion’ny rivotr’ankaso
Nandrakotra ngidy ilay fo mangatsiaka
Mainka ho potraka, tsy ho tamàna
Dia ketraka ve ?…tsy very kanefa
Fa misy fetra ny zava –drehetra
Kodiaran –tsarety ny fiainana an –tany
F’ilay Andriamanitra efa nandahatra
Mbola hitsiky ny fo mitomany
Ny ora –mikija mbola hitsahatra
Fa… ny fanantenana mitsilopilopy
Dia hiredareda , hanony indray
Hanome loko ilay fo saika fotsy
Ilay saika lasan’ny mandrakizay
Dia mitrakà, manàna finoana
F’izay mora kivy no ho rendrika foana
12 Mey 2002/ t@10ora 40mn alina
Meteza leitsy ialahy
Meteza ialahy manaiky
Fa ny tanintsika anie
Ekeo leitsy ho’aho
Fa mila fanovàna
Ny saina feno jay
Toa fositra hatrizay
Manimba ny tanàna
…manaiky ve ialahy ?
Ekeo fa ny fanahy,
No ampinga mampandroso
Mitondra fahafahana !
Ekeo fa ny vazaha
Fa tsy natao hibaiko.
Ekeo fa tsy sanàna
Izay mila fanovàna
Ka ilaina ny farimbona
Miraisa ! aoka ho sahy
Meteza ho MALAGASY
19 Desambra 2002
(Ho setrin’ny Tononkalon’i MM nosoratany ho ahy hoe : « NIKELEZANA AINA »)
Raha ny tena izy, dia mbola miatrika aho ;
Tsy maintsy manoloana ny zo sy adidy maro
Ho an’ireo taranako ,
Ny fitolomako aza tsy takatry ny saiko,
Fa saika isan –taona
Dia tsapako amin’ny dinitra
Sy ren’ny havizanako !
« Tia mitolona aho,
Sa tsy mety ho tody
Amin’ny tanjona tratrariko :
Dia reraka ny aiko !!! »
Antitry ny tolona mivaloharika aho,
Fa miaina anaty kiry,
Mba hamela mamy hahafa –po ny zanako !
Tsy tena mbola haiko hoe : « firy koa ka firy
Ny adidy miandry ahy
Sy andrasan’ny Tanànako !? »
Ka aleo hitolona aho,
Na volo, na fotoana , manomboka ho fotsy
Fa adidy mba efaiko !
26 Septambra 2003/t@ 5ora 30mn hariva
BERONONO – ANJOZOROBE
( Ho setrin’ny Tononkalo nosoratan’i Dadan’i FI ho ahy hoe : « DOSSIER BERONONO » )
Matimatiny ihany ise raha nisaina vetivety
Hoe : « Ilay Poeta iny,
Asavaonan –drehareha hiedinedina an –gazety,
Ka hibahana Onjam –peo
Eo am –pitsenàna ny alina,
Ny hodokafana no tiany ! »
Fa jereo ny fifaliany :
« Matimatiny amin’ny taniny
Tsy mba misy Mpanazava !
Namakivaky ny aty ala
Hoe mitabataba lava !
Tsy aman –defona, tsy basy ;
Namaky lohasaha sy havoana.
Tena sahy mitolona izy
Niho –potaka aman –jofo :
Nefa dia Poeta foana ! »
Nino haika angamba ise fa nolemana ho larony,
Hay ka ilay Poeta mihitsy
No nanentina tantely tamin’ny tany be ronono ?
Efa tapa –bolana izy tsy nitsahatra nandeha :
Lany tany kirarony !!!
03 martsa 2004/t@ 2ora 15mn tolakandro
Biraon’ny Fokontany ANTOHOMADINIKA AFOVOANY
Tsy hoe fandatsana ry Zandry malala,
Fa fo efa vato raha toa tsy hongaina,
Na koa tsy hiteny !
Fa miherina sahady ny taona mangidy
Nandaozan’i neny :
Ny andro nahalasana ;
I Neny Olon –tsotra sy mba nantenaina
No rembin’ny fasana, lasa nandeha,
Fa nihinjitra an –dalana,
Folaka an –daton’ny ditran’ise !
Ise any am –ponja, i Neny mitsotra ;
Dia resaka ditra tsy tana hoatr’ireny
No niova ho ratra nahafaty an’i Neny :
Ise notenenina, tsy azo raràna !
Ise mba natoro, tsy nety voatana !
Dia izao no iafaràny,
Nahafotsy rora ny olona ise vao nahadika lalàna ;
Efa kamboty vao mahatsapa onja
Ka ataovy anatra,
Aoka ho afo nandoro an’ise ny any am –ponja !!!
Tsarovy ny hoe :
Ny antony tena nahafaty an’i Neny ?
NY DITRAN’ISE !!!
24 mey 2003 /t@ 8ora 30mn alina
SAF –TSINJO – Anjanahary
Ny marina lazaiko
Dia lainga tsara rindra
Ao anaty faniriana
Mandainga fahamarinana !
Satria nahoana indrindra ?
Narafitro ny marina
Hivetso lainga masina
Eny an –tsahan’ny fanahy
Hioty teny maro
Hampita hevi –dalina
Sy fy mifangaro
Ao am –pon’ny mahatsiaro
Fa mankafy ny kanto
Sy tia ny tena marina
Voalaza an –daingalainga
Dia ny tena ainga
Ilay milaza zava –misy
Ao anatin’ny tsy misy
Nefa mety hisy
Any am –pon’ny tena tia
Sy an – tsain’ny Mpankafy
Ny zavakanto amin’ny teny
Ireny soratra ireny :
Milaza lainga marina
27 Aogositra 2001
Fa mamy tsy foy hoatra an’iza Sakaiza
Ny tena mba tsiron’ny Seza hoatr’itony ?
Dia hitondra ho aiza ?
Vao anankiroa izao no nazera teo,
Dia mihoko amin’ny fatana sy ny vilany :
Vaky barara, MARARY VAVONY,
Tsy tia tsaramaso !
Kanefa any an –ketsa manjary salama,
Tsy dininy akory ny andraso…andraso
Fa mambosibosika , homana ihany !!!
Mba hafa ny fihevitry ny olona sasany,
Fa ny hitondra bontolo eo foana
No fara –tampon’ny zavatra andrasany,
Nefa efa teo…
Tsisy n’inon’inona niangana akory
Fa andraso…andraso mandritry ny taona .
Ny olona entiny ery efa leo,
Izy avy mihinana ety, dia matory !!!
Afa –baraka !
Fa ny Olomboafidy sy BEN’NY TANANA
No nahorongorony anaty fonosana,
Saika hofafàny !
Noheveriny angamba ity olona ity
Fa gadragadraina tsy misy lalàna !?
Afaka ireo, fa ny vavam –bahoaka ?
Tsy mety mangina, tsy mety voarara :
Ny hanoso –potaka any aminy ihany !
9 Febroary 2004/t@ 9ora 57mn maraina
BERONONO –Ambatomanoina - ANJOZOROBE (107)
FI – ANATSA
Etsy kely ange !
Ampianaro aho sakaiza
Ampianaro tsy mandainga
Ampianaro aho ho’aho
Mampifaly tsotra izao
Hankafy ny tena vero
Ampianaro aho hitia
Fa hampianariko ianao,
Ilay isika mankafy
Dia… ampianaro aho rahavana
Tsy hanao fitia boloky
Fa… hampinariko ianao
Fa ampianaro aho .
05 Mey 2002/ t@ 9ora 06mn alina
Misy ny fotoana azo amindràna fo
Fa tsy androany kosa !
Ianao tsy mahatsikaritra,
Fa ny olona rehetra no lasa alaim –panahy
Manondrotondro molotra sy tapitra mifosa
Mahita anao sy izy…
Iny zazavao amin’io fitiavana io,
Ianao koa manadino fa efatra ny ankizy !
Karazan –takoritsika hatramin’ny fara –hehy
No mitazana anareo mameno ny arabe :
Fa ny vadinao ?
Fara – fahoriana mandinika an’izany !
Izy anie tsy mihevitra izay ho aviny any intsony e !
Ianao no manam –bola , dia ianao no amikirany ;
Ianao no maivan –doha
Dia mety harirarirany hanosy tokantrano ;
Izao tsy tana intsony fa mihitatra ny afo !
Miakatra ny rano !
Angamba raha vao dila indray mahamasa –bary,
Dia ho tafo lanitra io, fa kila koa ny tafo !
Hatramin’ny vovonana no indray mivaralila
Sy miha –tsizarizary .
Mba hafahafa mihitsy itony isika itony
Rehefa tena hivaona,
Fa dia lehilahy lehibe sy hoatra anao izao
No sahy mandafidafika amin- jaza tsy ampy taona !?
Tsy matinao ny sary,
Fa samy manameloka izao ditranao izao,
Hatrany Andravoahangy, ka hatreny Anjanahary.
19 Febroary 2004/ t@ 6ora 23mn maraina ANTANAMBAO – Antsinanan’i TALATA VOLONONDRY
Ary koa saintsaino
Ny zava – tinakin’
Dia aza manaiky
Ny hevi –tsy azo
Avy eo tsikerao
Ho hitanao fy
Ny mianoka an –tsaina
Anaty fo tia
Ny sary tononkalo
Tsy maintsy ajorontsika ny maha – MALAGASY
Na ilam –pototra aza no lavaky ny angady
Atsatoka androany !
Na tolona, na ady hahamena lamba
No teboka hiafaràny !
Tsy maintsy haverina eto ny GASY NIANDOHANA ?
Naha MALAGASY HENDRY, ny Ntaolo razantsika
Odiantsika jamba !
Fa aiza ve r’ise, ka dia ny ho Zanako avy
No hiraparapa ao anatin’ny aizim –pito
Hihambo fa TSY GASY !?
Dia hamantana inona ny aina hifampitohy
Raha tsy atsatotsika ho andry hiankinany eto
Ny manda sy ny lasy ?
Ka ny teny hosoratako : tsy maintsy teny malagasy !
Ary ny hira hohiraiko : dia ny HIRAKANTO MALAGASY
Ny hafatra ho an’ny Sombinaoko, dia ataoko an –taratasy
Fa n’iza n’iza hipoitra avy amiko,
Dia tsy TSY MAINTSY MALAGASY
HITOETRA HO MALAGASY
Izay vao misy Firenena tena mahaleo tena !
Ka raha ny aiko anio no mangana,
Mbola hisy roa hitsangana hanofahofa fandresena,
Mbola hisy telo hiangana, eny, telo hatramin’ny fito !
Mbola hisy Firenena hirehareha ho MALAGASY
Amin’ny andron’ny taranako,
Hamakivaky aizim –pito :
Dia NY ZANAKO ! NY ZANAKO !!!
10 Novambra 2001/t@ 8ora 18mn alina
Ambatokaranana – Ampasampito – ANTANANARIVO
Hafahafa sakaiza ny tia vehivavy
Tsy mba fitafy na toerana, fa aiza
Dia olona vatana hitanao izao
Fa hafahafa sakaiza ny tia vehivavy
Tsy saribakoly mandeha vatoaratra
Na takamoa miloko tsy fantatra
Fa endrika zavatra misy fanahy
Rakofan’ny lokom –panairana maro
Fa hafa sakaiza ny tia vehivavy
Fitiavana maro no he fa mitambatra
Tonga mamorona zavatra tokana
Dia tia,hono, ianao !
Fa inona loatra no dia tiavina ao e ?
Ny endriny kanto sa…
Ny volony mitosaka mihofahofa
Sa ny bika tsy ratsy izay mitahiry
Ilay loharano tsy tokony ahofa ?
Sa koa ny aty fanahy mahay miangola
Manary ny maso lalaovin’ny vola ?
Fa olona maro no indro mipetraka
…fa ny vehivavy ?
Vatana aloha , miampy fanahy
Rehefa avy eo fonosin’ny kanto , rongonin’ny maso
Ary laroin’ny fihetsika sahy
Mampifangaro ny biby sy ny olona
Fa tian’ny lehilahy ny mitolotolona
Sy misakambina azy ireny
Dia hoy aho hoe
Mahaiza mijery ny tena vehivavy
Tsy ho voan’ny tazo
Fa sarotra anie ny mitia vehivavy e !
Sao ho sodokan’ny endrika ivelany
Sy ny fisosan’ny ngotin’ny lelany
Ka rendrika eo !
Ny ati –fanahy, mibaiko ivelany
Ny tena vehivavy
Fa aza miaina fitia hafahafa
Ao an –trano falafa.
30 Novambra 2002/ t@ 1ora 39mn tolakandro
Anjaran’ise ny mametraka hoe :
Tokony hiroso sa tokony hihemotra ny aminareo ;
Ise no hisafidy !
Fa n’iza hisakana, n’iza hidrikina,
Dia mbola an’ ise ihany ny teny farany ;
Ise no hiaka –peo !
Hitako tamin’ny fiarahantsika
Fa ise tsy mahavita,
Raha sady mikimpy no ‘ndeha hitsambikina ;
Ary io tsy voarara , na iza handidy
Na iza hibedy ;
Fa ho tafaray sy hiroso ianareo
Raha ise no anjarany.
Anjaran’ise ny mitsako ny hoe :
Ahoana sy ahoana ny fikasakasan’ny Fianakaviana ,
Rariny ve ?
Kanefa tsarovy , fa ny Tokantrano
Ilàna ny tenin’ny Ray aman – dReny,
Tsarovy foana, na aiza na ho aiza izao teniko izao :
« Ny fanambadiana, miandry tso –drano !
Voarary soa io vao afa –mandeha,
Vao afa –mizotra »
Izao no hafatrafatr’i FENO ry Zandry,
Teny nomeny :
« Hafatra mety hisainan’ise,
Fa hafatra tsotra ! »
20 Aogositra 2003 /t@ 8ora 32mn maraina
Tao MANANKASINA – BETATAO –ANJOZOROBE (107)
Lazaina fa adala sy Mpanonofy lava,
Ny Poeta… ny Poeta !
Hoe : mangetaheta,
Lazaina ho kely asa sy tsy misy hatao
Lazaina fa Mpandainga, Mpirediredy foana,
Ny Poeta…ny Poeta :
Mpifosa… Mpisoketa !
Lazaina ho izao sy izao
Lazaina fa tsy ao…nefa…
Maro mpankafy, betsaka mpandranto :
Vakiana, halalinina ilay lokon-tsorakanto ;
Ny heviny, vimbinina !
Fa iza indrindra moa no nanoratra azy ireny ?
Moa tsy ilay Poeta, lazaina fa Mpitsetra ?
…ilaina dia ilaina, fa sakafon –tsaina
Ny kalon’ny Poeta,
Fa lova mitoetra , tsy amin’amboletra
29 Mey 2002
Raha mba mamy ihany zandry ny fiarahana hatrizay
Sy ny antony ifankatiavana ;
Ary raha mba tian’ise ny hampanara –dia anay,
Hilahatra, hitandavana ;
Na irian’ise hananana ny fahatsiarovana an’i FENO,
Dia izao bedibedy izao no ataovy folo an –tanana :
N’inona n’inona adilahy sy fifamaliana kely
Any an-tokantrano any ;
Fadio ny mikasi –tanana !
NY ZANAK’OLONA, TANDREMO !!!
Hampakatra azy ise dia hiroso,
Ka ito ny ahy mba teny kely :
« Ataovy an –tsaina lalandava sy mba diniho foana zandry,
Fa ny Olombelona, tsy Anjely !
Aoka aloha izay hazava !
Fa sao dia resa –tondro –molotra sy siosio mba henoheno,
No hamonoana andefomandry,
Na hampodiana ZANAK’OLONA
Ataovy fetry ny fitiavana ny fara –fiantran’ise,
Sy ny fara – fandeferana ;
Ka izao no hafatro ry Zandry,
Raha sendra lavo izy, hareno !!! »
Fenoy soratra ny lalana sy ny takelaka rehetra ;
Ataovy tototra eny : FENO !
Fa ny ahy ny rahona eny ambony
No hovontosako valopy sy taratasy ho an’ise ;
Ka vao saron –drahona iny,
Dia tsarovy izaho onena sy mibedibedy hoe :
« NY ZANAK’OLONA E !TANDREMO !!! »
Tsa vô hitako malala
Raha ‘zao paradisa izao,
Aia kay ro hombàna
Hengako ho any amignao
…va lalan –tany ‘zao ?
…va lavitsa mandilatsa
ka mila agnay mahiratsa ?
Tiako loatsa manko
Ilay fo mamatopatotsa
Ny dia tafaray
Ny masognao zahako
Kô mangeka agnay
Ny foko lasagnao.
De tiako loatsa ho’aho
Ny anilagnao izay
Mamikitsa , mandaray
Ilay dia tadiavinao
Am – paradisagnay.
… fitia mamindra an –tsoroka
23 Janoary 2003
Firifiry ny tanora ,
Lany andro miady saina
Ny amin’ny resaka fitiavana ?
Firifiry hoy ianao ?
Firifiry ny tanora,
Ory sy miferin’aina
Efa sasa –mitandavana ?
Firifiry koa no lao… ?
Firifiry ireo tanora,
Potraka eny an –dalany eny,
Ka solafaka fanahy
Fa nilalao vy mahamay ?
Firifiry ireo tanora
Mbola zaza dia efa « RENY »
Fa voafita –tovolahy
Hamela « ZAZA TSISY RAY ? »
Efa sahy nanindrona antsy
Irony sitra –po nilaina ?
Firifiry, hoy ianao ?
Firifiry ny Mpitsabo
Miray tsikombakomba ratsy
Amin’ny famonoana aina
Amin’izao fotoana izao ?
Raha arakao ny tantara…
Dia misy azonao hambara !
Taona 2002 – Manankasina –BETATAO (Anjozorobe)
Viavy ianao, viavy
Viavy ka viavy
Viavy soa sahady
Ny foko ringidringitsa
Ny somanao fitiavana
Viavy manko ianao
Nanenga anahy mandraina
Handremby anao an –tsaina
Ianao tsy tazako iny
Nanoroka anava any
Am –parahali –mamin’
Ny foko izay mandigny
Ny afo anatinao .
Fa viavy tsara ianao
De tiako ianao ‘zay
F’anavako ho anao
Ny amiko ho anao.
27 Janoary 2003
Ianao matimaty amin’ny Olo –mandalo :
Hitia tena tia,
Dia mianoka rivotra kely miserana
Feno fanamby !
Ianao vao lalovany itendreny kalo,
Dia may hiara – dia ;
Fa ny azy io fitiavana sendra nitobaka :
Be manana amby !
Ianao revorevo, kanefa izy anie
Tsy honina akory e !
Izaho namany aza no mba nikirizany
Sy novangiany ;
Fa aty amintsika, hono, lavitra be
Tsy miada –matory ;
Ka toa hihaza rivotra ianao sombinaiko
Raha miady ho tiany !
Kanefa asanao… fa anao ny fitiavana
‘ndeha	hotavaniny ;
ianao no hiaina fitiavana roa
Sy hampirafesina ;
Tsy ianao ho very no tiako hahatongavana
Hiala amin’ny taniny :
Fa sao re voafitaka ianao Sombinaiko
Vao bedibedesina !!!
29 Jona 2003 / t@ 5ora 10 mn hariva
BERONONO –Ambatomanoina –Anjozorobe ( 107)
MILOKO TSY FITIA
Angamba fanaperana ny fotsy fihodirana,
Mamony voahirana anaty voninahitra ;
Fa fotsy mantsy ianao dia halanao ny foko
Fa tampon’ny fitiavana ny lokonao mazava,
Fa mainty fihodirana, mainty aho angamba !
Dia mainty koa ny foko.
Hatramin’ny fitiavako , halanao filoko
Fa maizim –pihodirana ny volon –tokontaniny,
Fa mainty volon –koditra ny tsaranao aminy
Dia verinao ny zony
Fa misy ny ambony
Ny ambony ambaninao
Ny ambany ambony vintana
Fa vitambita –mainty
Ny ambany anatiko ao
Dia tsisy ny toerana
Dia tsisy ho an’ny mainty ny fonao niriako
Fa mahantra ny fitiavako, ambany ny fiaviako
Ambony kosa ianao, ambony fari –piaina
Ka tsy natao ho ahy
Nahoana no noferana ny lokon’ny fitia e ?
Ho ahy ?
Ny rà mitovy loko :
« Mainty ny fitiavako fa madio ny foko,
Tia am –panahy. »
17 Janoary 2003
Ny fiainan –dry
Tsy mitovy amin’ny fiainana iainako aty
Fa atao hoe : morainy ;
Angamba ny alina ifametsoana no mba itovizana,
Fa ny eto an –tanàna
Tongotro sendra voafingana fotsiny
Dia hita andihizana !
Olona sendra vaodona tsinahy
Dia lasa vavàna.
Ianao any tony fa izaho sakodiavatra :
Lalako niaka –tsy nidina teto
Tsy vakiko intsony.
Indry mbola sambatra
Fa ny itolomana sy mampahory
Dia ny adin –tsaina ;
Fa izaho ity lahoana amin’ny Olon –drehetra
Ny alina iafenako anatin’ny aizina
Tsy sitrako haraina. Miezaka hitsiky
Kanefa vao mainka miha –bongo ny maso
Ny adin –dry,
Tsy mitovy amin’ny ady atrehako aty
Fa atao hoe karazany
Ny ahy izao namana mba nitarainana
Tonga nandatsa, nanjary fahavalo,
Ikakakakàny aho raha sendra tazany.
Tokana ny ady kanefa tsarovy
Fa ny onjam –piainana akia tsy mitovy a !
Mandriana ny aty !!!
Zoma 25 Jolay 2003 / t@ 8ora 55mn alina – Ambatomainty Antananarivo
Fahatsiarovana miotrika anaty
Apetrako ho velona mandrakizay
Ho anao irery, ho anao mandra –maty
Ataoko tsanganan’ny fo mifandray
Tsy tontan’ny ela, tsy ravan’ny taona
Sora –baventy tsy matin’ny gaona
Iriako izao hotsaroanao foana
Atao an –tadidy, tsy avela ho moana
Rano sy vary no tanjona omaly
Orana ao anaty natao idealy
Volana sy kintana no mifamaly
Anatiko ianao, izaho aminao any
Natao ho tsaroana ny dina natao
Aza hadinoina izao kanto izao
… ny hatsaràny !
22 Janoary 2003
Malalason (26/08/2006 11:44:41)
Misy kalo mahakasika ny zavatra niainako ka izay no nanainga ny fanahiko haneho hevitra kely : Rano trambo : efa nanoma tena ihany aho mba tsy ho maty² tamiko izy kanefa nisy hery ts hay tohaina ka na nandratra aza dia nirobohana satria mamy ny mitia na dia ampaha-tsegondra aza.
Ny Zoky malalan'ny zandry tsy foiny
Daty : 26/04/2004
Mpamangy : 3913